ဘ၀ဇာတ်ခုံ ပန်းမျိုးစုံ: ခန္ဓာဘုရားလား ဥာဏ်ဘုရားလား?
Unknown | 6:36 PM | ဘာသာရေးအမေးအဖြေ
ဘုရားရှင်ဟာ ခန္ဓာဘုရားလား ဥာဏ်ဘုရားလား?
ဘုရားရှင်သည် လူသားဇာတ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေခန္ဓာကိုယ်လို ဘုရားရှင်မှာလဲ ခန္ဓာကိုနဲ့ပါပဲ၊ သို့သော် ဘုရားရှင်ရယ်လို့ အမည်ရခြင်းသည် သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော် တည်နေလို့ပါပဲ။ ဘုရားရှင်၏ သန္တာန်သို့ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော် မရောက်မီက ငါသည် ဘုရားဖြစ်၏လို့ ၀န်ခံတော်မမူခဲ့ပါဘူး။ သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ကို ရပြီးမှသာ ဘုရားရယ်လို့ မိမိကိုယ်ကို ၀န်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သဗ္ဗညုတ ဥာဏ်တော်ဟာ ဒီအတိုင်းကြီးတည်နေတာမဟုတ်ဘူး ခန္ဓာကိုယ်တော်ကို မှီပြီတည်နေတာပါ။ ကော်နဲ့ ကပ်ထားသလိုမျိုးတည်နေတဲ့ သြပသိလေသိကာ-တည်နေပုံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အရာမျှလောက်တည်နေတဲ့ ၊ ဝေသယိက-တည်နေပုံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ အနီးကပ်တည်နေတဲ့ သာမီပိယာ-တည်နေပုံမျိုးလဲ မဟုတ်ဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်တော်တစ်ခုလုံးကို မွှမ်းထုံးပြီးတည်နေတဲ့ ဗျာပိကာ-တည်နေပုံမျိုးဖြစ်တယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ လောကမှာ အမွှေးနံ့အထုံလိုပဲ။ အမွှေးထုံကို လိုချင်တဲ့သူဟာ နံ့သာတုံးကို ယူလိုက်တယ် ဆိုပါစို့၊ အဲဒီနံ့သာခဲကို သူလိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ အမွှေးနံ့သာကိုလိုချင်တာ။ ဒါပေမယ့် အနံ့ရဲ့ တည်ရာ နံ့သာတုံးကိုပါယူရတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဘုရားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဥာဏ်တော်ရဲ့တည်ရာ ခန္ဓာတော်ကိုပါ ကောက်ယူရပါတယ်။
ဥာဏ်တော်သာဘုရားလို့ ဆိုလိုက်ရင် ဒေ၀ဒတ်က ဘုရားရှင်ကို သွေးစိမ်းတည်အောင်လုပ်တာ အနန္တရိယကံထိုက်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဓါတ်တော်မွေတော်တွေကို ပူဇော်တာလည်း အကျိုးမရှိဘူး။ အဲလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲလိုယူပြီး ဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ရင် ပဉ္စာနန္တရိယကံလောက်နီးပါး အပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုပြောတာလဲဆိုရင် ပေတ၀တ္ထုအဋ္ဌကထာ ၁၉၆-၇ မှာ အဇာတသတ်မင်းကြီးက ဘုရားရှင်ရဲ့ ဓါတ်တော်များကို အမွေရပြီးတဲ့အခါ ခုနစ်နှစ်၊ခုနစ်လ၊ခုနစ်ရက်လုံး ပူဇော်တဲ့အခါ ကြည်ညိုတဲ့သူတွေက နတ်ပြည်ရောက်ကြပြီး မကြည်ညိုပစ်မှားကြတဲ့ သူတွေက ပြိတ္တာဖြစ်ကြရတယ်တဲ့။
ဒါဆိုရင် အဖြေကတော့ ဘုရားဆိုတာ ခန္ဓာရောဥာဏ်ရောကို ဆိုလိုတာလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါပြီ။
တည်တောဆရာတော်၏ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ (၁)ကို ကောက်နှုတ်ရေးသားသည်။